Waxyaabihii laga diiwaan geliyey kulankii xalay ay Tottenham soo laabashada ku sameysay Ajax ee ay ku gaartay Final-ka Champions League – Gool FM
Waxyaabihii laga diiwaan geliyey kulankii xalay ay Tottenham soo laabashada ku sameysay Ajax ee ay ku gaartay Final-ka Champions League
Haaruun May 9, 2019
(Amsterdam) 09 Maajo 2019. Kooxda reer England ee Tottenham ayaa xalay soo laabasho cajiib ah ku sameysay naadiga Ajax ee dalka Holland, waxaana Spurs ay gaartay final-ka Champions League.
Spurs ayaa lugtii hore ee afar dhammaadka Champions League looga soo adkaaday gurigeeda 1-0, waxaana lugtii labaad oo xalay ka dhacay garoonka Johann Cruijff Arena ay markale Ajax la hormartay labo gool oo kale, laakiin Tottenham ayaa saddex gool ku dhalisay garoonkan.
Ajax kulankii xalay waxaa labada gool oo ay la horreysay u kala dhaliyey De Ligt 5’daqiiqo iyo Ziyech 35’daqiiqo, laakiin Tottenham Hotspur ayaa la timid saddexleey goolal ah oo uu u saxiixay Moura, taasoo ka dhigan inay Spurs 3-3 celcelis ahaan away goals ugu soo baxay final-ka Koobka Horyaallada Yurub.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankan ay Tottenham ku gaartay Final-ka Champions League:-
>- Spurs ayaa ka mid noqotay siddeed kooxood oo kala duwan oo Ingiriis ah ee gaartay final-ka European Cup ama Champions League, kaddib Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester United iyo Nottingham Forest.
>- Tottenham Hotspur ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee ka soo laabta labo goo loo lagu hoggaamiyey isla markaana guul gaarta kulan ka tirsan afar dhammaadka Champions League, tan iyo Manchester United oo semi-final sidaan oo kale ku sameysay Juventus sanadkii 1999-kii.
>- Matthijs de Ligt waa ciyaaryahankii afaraad ee da’yar ah oo gool ka dhaliya afar dhammaadka Champions League kaddib Nordin Wooter 1996 ka dhaliyey Ajax, Obafemi Martins oo 2003 ugu shubay Inter Milan iyo Kylian Mbappé oo 2017 ka dhaliyey kooxda Monaco.
>- Lucas Moura ayaa dhaliyey saddexleey dhaliyey markii ugu horreysay tan iyo saddexleeydii uu ugu shubay Bournemouth 13 bishii April.
>- Lucas Moura ayaa ka mid noqday shan ciyaaryahan oo kala duwan oo saddexleey ka dhaliyey afar dhaamadka Champions League, kaddib Alessandro Del Piero, Ivica Olic, Robert Lewandowski iyo Cristiano Ronaldo.
>- Taasi waxa ay ka dhigan tahay in Lucas Moura uu hadda kaga saddexleey badan yahay semi-finalka Champions League maadaama uu xalay hal saddexleey ka dhaliyey ciyaaryahan Lionel Messi oo aan wax hat-trick ah ka dhalin heerkan.
>- Kaliya 204 ilbiriqsi ayaa u dhaxaysay goolkii koowaad ee uu Lucas Moura u dhaliyey Spurs iyo goolkii uu ku barbareeyey ciyaarta kulankan.
>- Lionel Messi oo 8 gool gacan ka geystay ayaa ku lug yeeshay goolasha ugu badan heerka bug-baxa Champions League in ka badan Hakim Ziyech xilli ciyaareedkan kaasoo heerka knockout-ka tartankan shan gool gacan geystay saddex gool oo uu dhaliyey iyo labo uu caawiyey.
>- Hakim Ziyech ayaa ku lug yeeshay 40 gool oo kooxda Ajax ay dhalisay tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan, waxa uu dhaliyey 21 gool waxaana uu dhiibay ama caawiyey 19 gool oo kale.
>- Lucas Moura ayaa noqday Brazilian-kii ugu horreeyey ee saddexleey ka dhaliya heerka Semi-finalka Champions League, iyadoo ay arrintan horay u sameyn waayeen xiddigaha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho iyo xitaa Neymar.
>- Waa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2008 iyo markii labaad ee Taariikhda tartankan Champions League ay final-ka isugu yimaadaan labo kooxood oo Ingiriis ah, waxaana sanadkii 2008 isugu yimid Chelsea iyo Man United.
>- London waa Magaaladii ugu horreysay ee Taariikhda Champions League ay saddex kooxood oo kala duwan oo ka dhisan ay gaaraan kama dambeysta tartankan ama Final-kiisa, waxaana gaaray Arsenal, Chelsea iyo Tottenham.
>- Dušan Tadić ayaa noqday ciyaaryahankii labaad ee gacan ka geysta 10 gool oo Champions League ah xilli ciyaareedkan, 6 gool waa uu dhaliyey halka uu dhiibay 4 gool oo kale, ciyaaryahanka kale ee kaga badan waa Lionel Messi.
Ma aragtay wixii ay sameeyeen Ciyaartoyda MUSLIMIINTA ah ee kooxda Ajax intii ay socotay ciyaartii xalay ee sida Mucjisda ahayd lagu reebay!!??+SAWIRRO
Maxay ka dhigan tahay in labo Kooxood oo Ingiriis ah ay isugu yimaadaan FINAL-ka Champions League??